सुनको मूल्य घट्यो, कति छ आजको भाउ ? - नेपाल कुरा
काठमाडौँ । आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आज प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले घटेर ९३ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको हो । बुधबार बजारमा सुन प्रतितोला ९४ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुन पनि तोलामा ३०० रुपैयाँले घट्दै ९३ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यता चाँदी भने गत बुधबारको मूल्यमा ५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै आज प्रतितोला एक हजार ३५५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
फेरि बढ्यो सुनको भाउ ! आज तोलामा ?
आज सेयर बजारमा हरियाली ! अब एक–दुई दिनमा कारोबार रकममा समेत तेजी आउने अनुमान
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका आज यी शाखाहरु खुल्ने (तालिकासहित)